About DIY Electric Skateboard - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Miaraka amin'ny herinaratra skateboard dia mafana sady nandray ny ankehitriny ny tanora, raha mbola manana ny tsara Electric biraom-mandanjalanja , izy dia matetika hanao ny sasany DIY araka ny tiany. Vao tsy ela aho mahita ny sasany mangatsiatsiaka DIY skateboard ao amin'ny Instagram.
Pace: A E-longboard haingana dia hanampy anao hahomby eo amin'ny toerana ara-potoana. Ny ara-dalàna 30km isan'ora ny hafainganam-pandeha, ny ambony mety ho tonga hafainganam-pandeha 45km isan'ora, mandehana haingana kokoa. Tombana iray hafa dia fitaovana izay ny herinaratra skateboard dia hihaona niraharaha rehetra isan'andro, toy ny fohy-mandeha, mandeha miantsena sy ny sisa.
Ireto manaraka ireto dia mampiseho ny Koowheel mpividy ny Electric longboard Skateboard D3M fa voafidy tao amin'ny Instagram. Iza no tianao? Mangatsiaka izy ireo sy ny mahafinaritra. Koowheel dia tena lamaody herinaratra skateboard izay manohana ny fototry ny mpanara-be izay gaga noho ny fahaiza-miasa mahomby. Nahoana no tena mafana? Izany dia Dual Brushless Hub-Motors, 7-sosona CanadianMaple Wood + fitaratra fibre (tsy voatery), ny fangatahany fahazoan-dalana tany dia 85mm (3.35inch), mety ho lalana rehetra ao an-tanàna. Ankoatra izany, replaceable bateria entana, 2pcs Packs bateria dia afaka haharitra 60km, mandehana intsony. Noho izany izahay dia nanana fanantenana avo, ary efa stoked raha tonga Farany.
Rehefa hitanareo fa tonga izany DIY famoronana, Moa ve ianao manana hevitra tsy manam-paharoa kokoa ao an-tsainao? Maro ny hevitra no namorona ny olona, ​​dia afaka maneho ny hevitra miavaka araka izay azo atao ary avy eo azafady hizara antsika tenifototra Koowheel amin'ny Instagram. Koowheel vohikala ofisialy sy ny Facebook no mizara ny traikefa KOOWHEEL.
Izy ireo tsy afaka nandeha izy, fa nianatra tao anatin'ny fotoana fohy. Izany zavatra izany no tanteraka Hoot mba hiaina amin'ny manodidina. Ento ary aminao amin'ny fitateram-bahoaka, ary mitaingina azy amin'izay lalan-kalehanareo fonenana. Vao haingana, Koowheel lasa 2 Generation Electric Skateboard Kooboard amin'ny replaceable kodiarana. Ary preorder azo ekena. Hanontany angamba ianao hoe inona no vaovao tamin'ny 2 daty taranaka iray? Mamelà ahy hilaza aminareo eto ambany.
New 350W X 2 Motors amin'ny Replaceable Pu kodiarana
Unique endrika hanampy Motors hihena maximumly
New connectors ny bateria Aza mampifandray olana
New fandaharana hiaro bateria avy ny voampanga ny regenerative braking. Ary dia namaky Kooboard tsikelikely sy ny fijanonana. New oniksa tokotanin-tsambo & Mafy Tape, sy ny maro hafa ...